Bahamas inogamuchira Frontier Airlines yekutanga ndege kuenda kuNassau
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » Bahamas inogamuchira Frontier Airlines yekutanga ndege kuenda kuNassau
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Investments • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Bahamas inogamuchira Frontier Airlines kuenda kuNassau kuLynden Pindling International Airport
VaBahamas vakagamuchira ndege yekuvhurwa kweFrontier Airlines nezuro nemufaro mukuru payakamhara paLynden Pindling International Airport. Frontier ndiye wekutanga anodhura-anodhura mutakuri wekupinda mumusika weCaribbean nemazuva mazhinji ekufamba pasvondo.
Frontier ichashanda yakananga nendege kubva kuMiami International Airport (MIA) kuenda kuNassau (NAS) kana pavhiki, kutanga muna Chikunguru 2021.
VaBahamas vari munzira yekudzoreredza kwekushanya uye kudzoreredza hupfumi zvichitevera dutu rinoparadza uye COVID-19 denda.
Kuwedzera kwakasimba kwekubhururuka nendege kubva kunhamba huru misika manhamba sechinhu chakakosha muhurongwa hwese hweHurumende hwekudzoreredza kwekushanya.
Sezvo kufamba kunoramba kuchidzoka kwakadzikama, VaBahamas vane shungu dzekugamuchira zvakare vashanyi vane dzimwe nzira dzekubhururuka uye vanobata muzhizha rino. Frontier ichashanda yakananga nendege kubva kuMiami International Airport (MIA) kuenda kuNassau (NAS) kana pavhiki, kutanga muna Chikunguru 2021.
Munguva yemhemberero yekutanga uye kuchinjana matombo, Hon. Dionisio D'Aguilar, MP Gurukota rezveKushanya uye Aviation, anounza mazwi kuFrontier Airlines 'ndege yekutanga kubva kuMiami kuenda kuNassau. Mufananidzo urikudzwa naKemueri Stubbs.
Gurukota rezveKushanya neAvhi, Hon. Dionisio D'Aguilar, anga ari mumwe wevakuru vakaungana paSir Lynden Airport masikati ano kuzokwazisa ndege yekutanga uye akataura mazwi ekudziya ekugamuchira.
Shanduro yedombo na Hon. Dionisio D'Aguilar, MP, Gurukota rezveKushanya neAviation, uye vatungamiriri veFrontier Airlines panguva yemhemberero yeFrontier Airlines yekutanga ndege kubva kuMiami kuenda kuNassau.
“Ndinokudzwa uye ndinofara kuti Frontier Airlines yafunga kubatana nayo The Bahamas, kunyanya panguva ino yakaoma, apo patinopinda munzira yekudzoserwa kwekushanya uye kudzoreredza hupfumi zvichitevera dutu rinoparadza uye nguva pfupi yadarika, denda re COVID-19. Ndinotora mukana uno kukugamuchirai noushamwari muBahamian uye kuratidza kutenda kwedu nemwoyo wose pamusoro pekudyidzana kwenyu. ”
Mufananidzo uri kuruboshwe kurudyi paMiami Airport ndiBarry Biffle, Mutungamiri uye CEO weFrontier Airlines, naMai Linda Mackey, Consul General weBahamas Consulate Miami. Frontier Airlines yakapa Zvitsuwa zveBahamas nechipo chemuenzaniso weFrontier Airlines Ndege uye Zvitsuwa zveBahamas zvakapa mufananidzo wakagadzirwa neBahamian mukurumbira muimbi, Jamaal Rolle.
Kuwedzerwa kweFrontier Airlines kunhamba iri kukura yevatakuri vemhepo vanoshandira Iyo Bahamas inouya semhedzisiro yekuenderera mberi kwekutyaira nebazi rezveKushanya & Aviation uye vakakosha maindasitiri vanobatsirana kuwedzera ndege kuenda kunzvimbo. Kuwedzera kwakasimba kwekubhururuka nendege kubva kunhamba huru misika manhamba sechinhu chakakosha muhurongwa hwese hweHurumende hwekudzoreredza kwekushanya.
"Ndege dzinoverengeka dzeFrontier Airlines pavhiki dzinopa mweya wekufema kuhupfumi hwedu hwekushanya sezvo iyi link yemhepo ichibatanidza kwatinoenda kunzvimbo ye Southeastern USA, kusanganisira Florida, musika watinokwezva chikamu chakakura chevashanyi vedu pagore, "Vakadaro Gurukota D'Aguilar."
Vashanyi vachave nemukana wekunakidzwa nemahombekombe akanaka uye kuongorora zvinonakidza zvinopihwa zveNassau uye Paradise Island.
Ongorora zvese zviwi zvaunofanira kupa pa https://www.bahamas.com/ kana uri Facebook, YouTube or Instagram.